Soo Celinta siyaasada-Qasabada Jikada ugufiican 2020 | Tubooyinka Ugu Jikada Fiican | Qasabada jikada
Bogga ugu weyn / siyaasadda Soo celinta
Waxaan haynaa siyaasad soo celinta 30 maalmood ah, taas oo macnaheedu yahay inaad haysato 30 maalmood kadib markaad hesho shaygaaga si aad u codsato soo laabashada.
Si aad ugu qalanto soo laabashada, sheygaagu waa inuu ahaadaa sidii uu ahaa markii aad heshay, oo aan dhalan ama aan la adeegsan, oo leh astaamo, iyo baakadkeedii asalka ahayd. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa rasiid ama caddeyn iibsi.
Si aad u bilowdo soo laabashada, waxaad nagala soo xiriiri kartaa service@wowowfaucet.com. Haddii soo laabashadaada la aqbalo, waxaan kuu soo diri doonaa sumad dib u celinta, iyo sidoo kale tilmaamaha sida iyo meesha loo dirayo xirmadaada. Waxyaabihii dib noogu soo diray anaga oo aan marka hore dalban soo celinta lama aqbali doono.
Marwalba waad nagala soo xiriiri kartaa wixii su'aal ah ee soo noqda oo dhan adeegga@wowowfaucet.com.
Khasaaraha iyo arrimaha
Fadlan kormeer dalabkaaga markaad soo dhaweyso oo isla markaaba nala soo xiriir haddii sheygu cilladaysan yahay, dhaawacmay ama haddii aad heshay shey qaldan, si aan u qiimeyno arrinta oo aan u saxno.
Ka-reebitaan / alaab aan la celin karin
Noocyada qaarkood ee alaabta laguma soo celin karo, sida badeecadaha burbura (sida cuntada, ubax, ama dhir), alaabada caadiga ah (sida amarada gaarka ah ama alaabada shaqsiyadeed), iyo alaabada daryeelka shaqsiyeed (sida alaabada qurxinta). Sidoo kale aqbalno soo celinta waxyaabaha halista ah, dareeraha ololi kara, ama gaasaska. Fadlan la soo xiriir haddii aad su'aalo ama walaac ka qabtid sheygaaga gaarka ah.
Nasiib darrose, aqbali karno soo-celinta alaabada iibka ama kaararka hadiyadda.
Sida ugu dhakhsaha badan ee lagu hubiyo inaad hesho waxa aad rabto waa inaad ku celiso shaygii aad haysay, isla markaana marka la soo celiyo la aqbalo, u samee iibsi gooni ah sheyga cusub.
Waan kula soo socodsiin doonnaa markii aan helno oo aan kormeerno soo noqoshadaada, oo aan ku ogeysiin doonno haddii soo celinta la oggolaaday iyo in kale. Haddii la oggolaado, si otomaatig ah ayaa laguugu soo celin doonaa habkaaga lacag bixinta asalka ah. Fadlan xusuusnow waxay qaadan kartaa waqti in bankigaaga ama shirkadda kaarkaaga deynta ay howsha ku qabtaan oo ay boostada ku soo celiyaan lacag celinta.
Haddii soo celinta ay sabab u tahay macaamilka, macaamilku waa inuu mas'uul ka noqdaa lacagta dhoofinta. Ujrada gaarka ahi waa inay kuxirantahay shirkada aad dooratay.
Haddii sababahayaga awgood awgood, badeecada la helay ay waxyeelloobeen ama aysan sax ahayn, macaamilkuna looma baahna inuu ku qaado khidmadda dhoofinta sababtan awgeed.
Lacag dib u habeyn ah laguma soo dalacayo macaamiisha si loogu soo celiyo badeecad.